February 2020 - Page3of 31 - Myanmar Fire Services Department
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ညောင်နီကျေးရွာအနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှောင်လမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၂/၅)နှ� ....
(၂၆.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၃ ၁၇)အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ညောင်နီကျေးရွာ အနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှောင်လမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၂/၅)နှင့် (၂/၆)အကြား၊ ဘီးလင်းမြို့မှ နောင်ချိုမြို့သို့ ယာဉ်မောင်း ဦးစိုးလွင် မောင်းနှင်သော NISSAN (အဖြူရောင်) (၁၂) ဘီး...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောက်မြို့နယ်၊ သံဘိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကန်ရေလေးကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
(၂၆.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၃ ၁၀)အချိန်ခန့်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောက်မြို့နယ်၊ သံဘိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကန်ရေလေးကျေးရွာ၊ ပိုင်ရှင် ဒေါ်အေးနွဲ့၏ (၁၅x၁၅)ပေ၊ ထန်းရွက်မိုး၊ ထန်းရွက်ကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်း နေအိမ်တွင် မီးဖိုမီးကြွင်းမီးကျန်မှတစ်ဆင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၁၃ ၃၀)အချိန်...
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဆီလီတောင်ရပ်တွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
(၂၆.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၁ ၂၇)အချိန်ခန့်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဆီလီတောင်ရပ်ရှိ ပိုင်ရှင် ဦးဒေါင်းခေါင်၏ (၂၀x၁၅)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း (၂)ထပ်နေအိမ်တွင် ပလပ်ခုံအပူလွန်ကဲရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၁၁ ၃၁)အချိန်သတင်းရရှိသဖြင့်...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ကျိုက်စကောအနောက်‌ကျေးရွာ၊ သာယာကုန်းပိုင်း၊ ပိတောက်မြိုင်လမ်း ....
editor | Feb 26, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၂၅.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ (၀၀ ၁၅)အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ကျိုက်စကော အနောက်‌ကျေးရွာ၊ သာယာကုန်းပိုင်း၊ ပိတောက်မြိုင်လမ်းနေ အိမ်ရှင် ဦးလှသောင်း၏(၃၆ x ၁၈)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်‌ထောင်၊ ပျဉ်ခင်း(၂)ထပ်နေအိမ်တွင် မီးဖိုမီးကြွင်းမီးကျန်မှတစ်ဆင့်...
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၁၁)၊ ရွှေညောင်ပင်လမ်း နေအိမ်မီးလောင်မှုသတ� ....
၂၅ .၂ . ၂၀၂၀ ရက်နေ့၊(၁၁ ၄၀)အချိန်ခန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ အမှတ်(၉) ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၁၁)၊ ရွှေညောင်ပင်လမ်းနေ အိမ်ရှင် ဦးနောင်နောင်၏(၃၁ x ၁၆)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ မြေစိုက်နေအိမ်ရှိ မီးဖိုချောင်တွင် လျှပ်စစ်ဟင်းအိုးဖြင့် ဟင်းချိုရည်တည်ထားပြီး...
Page3of 31« Previous12345...102030...Next »